जनस्वास्थ्य संघ निर्वाचन, बलियो प्रजातान्त्रिक समूह, प्रगतिशील रणनीतिक – Health Post Nepal
जनस्वास्थ्य संघ निर्वाचन, बलियो प्रजातान्त्रिक समूह, प्रगतिशील रणनीतिक
२०७५ असोज ४ गते १९:२१
देशभर क्रियाशील जनस्वास्थ्यकर्मीको साझा संस्था नेपाल जनस्वास्थ्य संघ (नेफा)को १३ असोजमा हुने अधिवेशनका लागि प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील समूहबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । २८ वर्ष लामो इतिहासमा वर्चस्व राख्दै आएको प्रजातान्त्रिक समूहलाई टक्कर दिन सत्तापक्ष गठबन्धनका तर्फबाट मोहनकृष्ण श्रेष्ठ अध्यक्षताको समूह मैदानमा उत्रिएको छ । तर, अध्यक्षमा दुईपक्षीय प्रतिस्पर्धा देखिए पनि अन्य पदमा प्रमुख पुराना वाम दलकै आधारमा उम्मेदवारी परेकाले चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक हुने देखिएको छ ।
प्रजातान्त्रिक समूहमा मधेसकेन्द्रित प्रमुख दलहरू राजपा र संघीय समाजवादी फोरमका समेत उम्मेदवार समेटिनु र कुनै पनि बागी नदेखिनुले यो प्यानल बढी मजबुत देखिएको छ । अर्को प्रगतिशील प्यानल पछिल्लो समयको राजनीतिक माहोल, सत्ता सम्बन्धन र सम्पर्कको प्रभाव मतदानसम्म पारेर प्रजातान्त्रिक समूहको वर्चस्व भत्काउने दाउमा छ । त्यसका लागि अन्तरकलहको व्यवस्थापन प्रगतिशील समूहका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिएको छ ।
तर, उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब दिएरै भए पनि अन्तिम दिनसम्म एउटै आधिकारिक प्यानलमा भोट जाने गरी चुनावी तयारीमा प्रगतिशील प्यानल छ । प्रजातान्त्रिक समूह भने आफ्नो भोट क्लस्टरलाई जोगाउन सके मात्रै निर्वाचन जित्न सक्ने आकलनमा छ ।
बुधबार नेकपानिकट केही वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी बसेर दुई समूहबाट उम्मेदवारी दिएकाहरूले एउटै आधिकारिक प्यानल बनाएको घोषणा गरे पनि सो घोषणाप्रति असन्तुष्टहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी कायमै राखेका छन् ।
अध्यक्षमा पुराना र परिपक्व जनस्वास्थ्यकर्मी श्रीकृष्ण भट्टलाई प्रजातान्त्रिक समूहले मैदानमा उतारेको छ । भट्टले लामो समय सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गरी गतवर्ष मात्रै अवकाश पाएका थिए । उनी संघका पुराना महासचिवसमेत हुन् । धेरै मतदाता सरकारी प्रणालीभित्रकै भएको फाइदा र दलनिकटका भोटरको भर भट्टलाई छ ।
प्रगतिशीलले वर्तमान उपाध्यक्ष मोहनकृष्ण श्रेष्ठ (पिएचडी)लाई मैदानमा उतारेको छ । वर्तमान उपाध्यक्ष हुनाले सिस्टमभित्रै बसेर काम गरिरहेको लिगेसी र सरकारी प्रणालीबाहिरको भोटमा श्रेष्ठको पकड बढी रहने विश्वास प्रगतिशीलनिकटका जनस्वास्थ्यकर्मीको छ । तर, अझै पनि पुराना दुई दल (एमाले–एमाओवादी) घोषणामा मिले पनि भोट र भावना मिल्ने कुरामा आशंका प्रगतिशील समूहको रणनीतिमा प्रमुख चुनौती बनेर देखिएको छ ।
बुधबार नेकपानिकट केही वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी बसेर दुई समूहबाट उम्मेदवारी दिएकाहरूले एउटै आधिकारिक प्यानल बनाएको घोषणा गरे पनि सो घोषणाप्रति असन्तुष्टहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी कायमै राखेका छन् । तर, गौतम र शाहीले भने संगठनको निर्णय स्विकारिसकेको बताएका छन् ।
अध्यक्षबाहेकका प्रमुख पदमध्ये उपाध्यक्षमा प्रजातान्त्रिक समूहबाट डा. कृष्णमान शाक्यको उम्मेदवारी परेको छ भने वाम समर्थकमा वसन्त अधिकारी र सुदर्शन पौडेलको उम्मेदवारी परेको छ । अर्को महत्वपूर्ण पद महासचिवमा प्रजातान्त्रिक समूहबाट जनस्वास्थ्यकर्मीमाझ राम्रो पकड भएका महेश्वर श्रेष्ठ एकल रूपमा मैदानमा छन् । तीबाहेक महासचिवमा प्रगतिशील समूहले चित्रजंग शाही आधिकारिक उम्मेदवार भएको जनाएको छ । तर, मैदानमा रहेका झलक गौतम, अनिल सिग्देलले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिइसकेका छैनन् । त्यसैगरी, सचिवमा राजपानिकट रामानन्द पण्डितको उम्मेदवारी परेको छ । प्रगतिशील समूहले दीपेन्द्र खड्कालाई आधिकारिक उम्मेदवार घोषणा गरेको छ ।
कोषाध्यक्षमा प्रजातान्त्रिक समूहका विनोद जोशी र प्रगतिशीलबाट रमेश भट्ट मैदानमा छन् । सहकोषाध्यक्षमा प्रजातान्त्रिक समूहबाट सञ्जीव शाह र प्रगतिशीलबाट नरेन्द्रकुमार झा मैदानमा छन् । प्रजातान्त्रिक समूहबाट सदस्यमा रविकान्त मिश्र, विमला भट्ट, रामचन्द्र सिन्हा, श्रीकृष्ण बस्नेत, निधु दंगाल, गजेन्द्रप्रसाद यादव, रोशन लामा, विमला भट्ट, रामबाबु सिलवाल र जितेन्द्र नायक र समावेशीतर्फ रोशन लामा, विमला भट्ट र गजेन्द्रप्रसाद यादव छन् ।
त्यसैगरी, प्रगतिशील समूहले सदस्यमा दुर्गा खड्का मिश्र, केशव चापागाईं, कैलाश तिमिल्सिना, कैलाश श्रेष्ठ, कमल रानाभाट, वसन्त देवकोटा, समावेशीतर्फ दुर्गा बजगाईं, प्रजिता माली र वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई मैदानमा उतारेको छ । प्यानलमा परेका बाहेक उम्मेदवारी दिने १३ जना अधिकांश प्रगतिशीलनिकटकै छन् ।
१ हजार ५ सय ९० मतदाता रहेको संघका ८ सय ३९ जनरल र ७ सय ५१ लाइफ मेम्बर छन् । यी मतदाताले सातै प्रदेशका राजधानी र काठमाडौंमा तोकिएको मतदानकेन्द्रमा १३ गते मतदान गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
यस्ता छन् अध्यक्षका एजेन्डा
मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा जनस्वास्थ्यकर्मीहरूले सबै तहका सरकारलाई सहयोग गरेर जनस्वास्थ्यका विषयलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्नेछ । त्यसका लागि संघले धेरै काम गर्नुपर्नेछ । म फुलटाइम दिएर संघलाई नेतृत्व दिन्छु । अहिले ३० हाराहारीमा पब्लिक हेल्थका कलेज भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनु एकातिरको चुनौती छ भने अर्कोतिर झन्डै ५ हजार जनशक्ति बेरोजगार छन् । प्रत्येक वर्ष १ हजार स्नातक थपिइरहेका छन् । यो अवस्थामा हामीले त्यो जनशक्तिका लागि ठाउँ सिर्जना गर्न कडा लबिङ गर्नुपर्छ ।
अर्कोतिर जनस्वास्थ्यसम्बन्धी छुट्टै काउन्सिल चाहिन्छ । त्यसका लागि एड्भोकेसी लबिङ मेरो प्राथमिकतामा पर्छ । म ०४६ देखि यो संघमा निरन्तर लागिरहेको छु । हामी स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छौं । साथीहरूले साथ दिए भने म संघलाई राम्रो नेतृत्व दिन सक्छु भन्ने विश्वास छ ।
डा. मोहनकृष्ण श्रेष्ठ
नेपाल जनस्वास्थ्य संघमा लामो समयदेखि प्रजातान्त्रिक विचार बोकेका साथीहरूले नेतृत्व गर्नुभयो । अहिले देशभर नयाँ राजनीतिक परिस्थिति आएको अवस्थामा हामीलाई काम गर्न अलि बढी सहज हुन्छ, नेतृत्व दिनुस् भन्दा उहाँहरू मान्नुभएन । हामी परिवर्तनका लागि मैदानमा छौँ । अर्को कुरा संघका एकपटकबाहेक सधैँ सरकारी क्षेत्रमा काम गरेका साथीहरूले नै नेतृत्व गर्नुभयो । जसले गर्दा सरकारी सिस्टममा बसेर सरकारसँगै ‘डिल’ गर्न कठिन भयो । हामी बाहिरबाट गएका मान्छेले कडा रूपमा आफ्ना कुरा राख्न सकिन्छ । अहिले ७ सय नयाँ साथीहरू आउनुभएको छ, उहाँहरू परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुन्छ । हामी छुट्टै घोषणापत्र निकाल्छौँ । जनस्वास्थ्य क्षेत्र माथि नपुगेसम्म नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र माथि उठ्नै सक्दैन । यो क्षेत्रलाई माथि उठाउन म काम गर्छु ।